Asongadin’ny Famonoana Ilay Vehivavy Niova Fananahana Ao Trinidad Sy Tobago Ny Fanavakavahana Atrehan’ny Vondrom-piarahamonin’ny LGBT · Global Voices teny Malagasy
Asongadin'ny Famonoana Ilay Vehivavy Niova Fananahana Ao Trinidad Sy Tobago Ny Fanavakavahana Atrehan'ny Vondrom-piarahamonin'ny LGBT
Voadika ny 27 Desambra 2017 8:13 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, Türkçe, English
Pikatsarin'i Sasha Fierce nandritra ny nisehany tao amin'ny horonantsarin'ny Friends4LifeTT, niresaka momba ireo fanamby atrehan'ireo olona niova fananahana any Trinidad sy Tobago.
Nandritra ny alin'ny 5 Desambra 2017, nisy vehivavy niova fananahana novonoina tao amin'ny valan-javaboary iray ao Port of Spain (seranan'i Espaina), Trinidad, firenena iray tsy misy rafitra araka ny lalàna ahafahan'ny olona hanova ny fananahany. Ny anarana voasoratra “ara-dalàna” an'ilay niharan-doza dia Keon Patterson, fa fantatra kokoa tamin'ny solonanarana Sasha Fierce (nalaina tamin’ny an'ilay Amerikàna mpihira, Beyonce), ka tamin'ny alàlan'izay izy no mpisolovava nafana fo ho an'ny vondrom-piarahamonin'ny olona niova fananahana tao an-toerana sy mpitondratenin'ireo tratran'ny VIH.
Niseho tao amin'ny horonantsarin'ny Friends4LifeTT i Fierce, izay nalefa Youtube tamin'ny Aogositra 2017, izay nijery ny hoe toy inona izany miaina tahaky ny olona niova fananahana ao Trinidad sy Tobago. Nandroso sosokevitra ireo tatitra fa hoe lehilahy roa no nitifitra sy nahafaty an'i Fierce, izay nantsoin'ny mpitandro filaminana mba ho alaina am-bavany.
Raha mbola zatra ny heloka bevava masiaka i Trinidad sy Tobago, nanandratra ny olana momba ny fomba fitondra ireo olon'ny LGBTQ (pelaka lahy sy vavy, nanova fananahana…) ao amin'ny fiarahamonina Karibeanina ny famonoana natao an'i Fierce. Tsy mbola naneho fandeferana ho an'ny fahalalahan'ny fisafidianana fananahana ilay repoblikan'ny nosy kambana, tsy toy ny hita any amin'ireo nosy firenena hafa, toa an'i Jamaika, izay naneho matetika tsy fahampin'ny fahatakarana ny momba ny vondrom-piarahamonina LGBTQ.
Mafy ny tenin'ireo mpampiasa tambazotra sosialy tany anatin'ny fitsikerany. Nalahelo i Lara Quentrall-Thomas:
Ity olona mahafinaritra ity, izay nikarkara betsaka ny hafa, maty tamin'ny tsy nisy antony .. raha tsy hoe angaha, noho ny maha-samihafa azy. Nahatratra toerana ambany vaovao i Trinidad.
Ny fanehoankevitra tao amin'ny taridresany imasom-bahoaka dia nilahatra avy tamin'ny fiantsoana ny firenena ho “tontolo fahatelo” mba hitsikerana ny fitondrana amin'ny tsy fametrahana lalàna hiarovana ny olona rehetra, amin'ny filazàna fa “tena mahavaky fo tanteraka sy mampalahelo fa tsy afaka miaina amin'ny maha-izy azy ireo mpikamban'ny vondrom-piarahamonina LGBT”
Voalisitra ho heloka mandika ny lalàna ao Trinidad sy Tobago ny sodomia, fa tsy voadika ho anatin'ny raharaha mbola miandry amin'ny resaka firaisana ara-nofo nifanekena eo amin'ny olona mitovy fananahana. Lafiny iray amin'ny olana ihany anefa ny lalàna; ireo fomba miraikitra mafy amin'ny fiarahamonina no mitady hanana fiantraikany mafy eo amin'ny fiainana andavanandron'ireo olona LGBTQ ao amin'ny habaka Karibeana.
Matetika ny fisainana tahaka izay no notarihan'ny fanambarana ara-pivavahana nentim-paharazana momba ireo vitsy an'isa ara-pananahana sy ny maha-lahy sy vavy. Tafiditra any anatin'ny tatitra any amin'ireo fampahalam-baovao mahazatra sy ny fanehoankevitra ao amin'ny tambajotra sosialy ny fitongilànana momba ilay famonoana ; izay notenenin'ny Fiarahamientana Hisoloana Vava ny Fampidirana ny Fironana ara-pananahana (CAISO) fa “tafiditra ao anatin'ny herisetra”.
Izany na dia nisy aza ireo andrana, taona vitsy tany aloha, hiresahana momban'ny fomba matotra sy maha-tomponandraikitra tokony hitateran'ny fampahalambaovao ny olana miantraika amin'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ. Raha naneho ny heviny momba ny andian-tantàra iray tamin'ny fahitalavitra, nandritra ny 2015, izay nanaraka ny andavanandron'ny vehivavy iray niova fananahana mipetraka ao Trinidad sy Tobago, niteny i Daniel Khairi; mpampiasa Facebook:
Mahatonga ahy ho kaodikaody ity ary mahatsiravina ny fanontaniana teo aloha. Mandrakariva ny olona niova fananahana no iharan'ny ‘maninona’ sy ‘inona ny ao anelanelan'ny fenao’. Tsy manam-pinoana aho hoe hanao ny mety manoloana ity vehivavy ity [ny fahitalavitra]
Nandritra ny taona maro, lasa fihetsehampo niraisan'ny rehetra izy ity:
Lack of education about the #transgender community in #Trinidad sees comments like these. #illuminati #comment #lmao https://t.co/aRGwqZH3K4
— Nehe (@N_J_Edwards) July 22, 2015
Ny tsy fahampian'ny fampianarana momba ny vondrom-piarahamonin'ireo niova fananahana ao #Trinidad no ahitana fanehoankevitra tahaky izao. #illuminati #comment (#fanehoankevitra) #lmao https://t.co/aRGwqZH3K4
Tsy nahataty ny tsy fahalalana intsony ny CAISO nony farany . Tao anatin'ny lahatsoratra maro teo amin'ny pejiny Facebook, notsikerain‘ilay fikambanana ny fomba fikirakiràna ilay tantara ataon'ireo vaovao ao an-toerana sy any ivelany:
Zavatra telo TSY azo atao rehefa misy vehivavy niova fananahana voavono: 1) Aza mandefa sarin'ny fatiny hanimba ny maha-olona any amin'ny vaovao ho avoaka. 2) Aza atao ho momba anao ny nahafatesany. 3) Aza manangona vola ho an'ny efitranonao any anaty hotely.
Fitsindrona iray tao amin'i Jason Jones, mpikatroka teraka tao Trinidad, monina ao Angletera, no nakàna ny hevitra, izay mihantsy an'ireo lalànan'ny nosy momban'ny sodomia ho tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana ao anatin'ny raharaha iray hohenoina amin'ny 30 Janoary 2018 ao amin'ny Fitsarana Ambony ao Port of Spain. Jones, izay niresadresaka tamin'ny Gay Star News, tao anatin'ny lahatsoratra iray momban'ny famonoana an'i Fierce, manandrana fanangonambola mba hiantohana ny fandaniany amin'ny fanangànana ilay fanamby araka ny lalàna .
Ao anaty lahatsoratra iray hafa, nidera fampahalambaovao iray ao an-toerana ny CAISO noho ny “nanitsiany ny tantarany taloha (izay niantso an'i Sasha ho ‘lehilahy niova fananahana’), ary nanova ny mpisolo anarana ao anatiny ho izy (she) sy azy (her). Navelan'ilay tantara nohavaozina koa ny resaka momba ny asa ara-nofo”.
Ao anatin'iny gazety iny ihany, Trinidad sy Tobago Newsday, nitondra tantara mitohy izay miteny fa “matahotra ny hisaona imasom-bahoaka ny fahafatesany” ireo naman'i Fierce satria matahotra ny hatao lasibatra, saingy tapaka ny hevitr‘i Andre Bagoo, mpampiasa Facebook:
Maty i Sasha Fierce fa henoy ito: fa tsy ny fahalalahana. Tsy hatahotra izahay. Tsy hijanona ao an-tranonay izahay. Halainay ho vady ny alina.
Ny 8 Desambra 2017., nisy fahatsiarovana natao ho voninahitrin'i Fierce.
1 andro izayTrinite sy Tobago
3 andro izaySuriname